အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်များကို စံသတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီသူများကိုသာ ထုတ်ပေးမည် - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၂၉- ၂၀၁၈-၂၀၁၉-ယခုပညာသင်နှစ် မှစတင်၍ အခြေခံပညာအထက် တန်းအဆင့်သင်ယူပြီးမြောက် ကြောင်းလက်မှတ်များ စတင်ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့မွန်း လွဲပိုင်း ရုံးအမှတ်(၁၃)၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာ နအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်း ပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေ ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ပညာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်ရရှိရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင် ရေးအတွက်၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ သင်နှစ်မှစ၍အခြေခံပညာအထက် တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်စီ စဉ်ဆောင်ရွက်နေသည့်ကိစ္စများ ကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် သ တင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း လက် မှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရခြင်းမှာအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများရရှိရန်၊ လိုက်လျောညီ ထွေသော ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိ ကာ လူမှုဘဝမြင့်မားလာရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေရရှိပြီးမိသားစုဝင်ငွေ မြင့်မား လာ၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချနိုင် ရန်၊ အဆင့်မြင့်ပညာနှင့် အသက်
မွေးဝမ်းကျောင်းပညာများဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန်၊ ကျောင်း သည် အရည်အချင်းအာမခံမှုရှိ သောသင်ကြားသင်ယူရာနေရာ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားပညာရေးစနစ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ စံသတ် မှတ်ချက်များ ပြည့်မီအောင် ပိုမို ကြိုးစားလာနိုင်ရန် တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ပြီးခဲ့ သည့် ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှစတင် ကာ ဆွေးနွေးမှုများအဆင့်ဆင့် ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်း မှပြောကြားခဲ့သည်။
အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကျောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍အ ခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း များ၊ အခြေခံပညာ အထက် တန်းကျောင်း ခွဲများ၊ တွဲဖက်အထက များ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(ယာယီ)များ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(စမ်းသပ်)များ နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေး ကျောင်းများဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ကျောင်းများထဲတွင် အထက်တန်း ကျောင်းများ၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ တပ်မတော်ကျောင်း၊ ကိုယ်ပိုင် ကျောင်း (ယာယီ)တို့တွင် အရည် အသွေးအာမခံသောစိစစ်ရေးအ ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ယင်းအဖွဲ့ကတစ် ဆင့် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက် ညီသူကိုသာ CC ထုတ်ပေးသွား မည်ဖြစ်ပြီး အထက်တန်းကျောင်း ခွဲများ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(စမ်းသပ်) များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး ကျောင်းများ တွင်မူအရည် အသွေး အာမခံသောစိစစ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ စည်းရမည်ဖြစ်သော်လည်း ယင်း အဖွဲ့မှ စိစစ်ရရှိလာသောအချက် များကိုပင်မကျောင်းသို့ တင်ပြပြီး မှသာ ပင်မကျောင်းမှတစ်ဆင့် CC ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရည်အသွေး အာမခံသောစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရာ တွင် သက်ဆိုင်ရာကျောင်း အုပ်ကြီး က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊Grade 11 ၏ အတန်းမှူးကအ တွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အတန်းပိုင်များ၊ ဘာသာရပ်မှူး ၊ဘာသာပြဆရာမများ ကအဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ်လည်းကောင်း သတ် မှတ်ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ပြီးလိုအပ် ပါကတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်း၊ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စံသတ်မှတ် ချက် ခုနစ်ချက်ရှိပြီးယင်းစံသတ်မှတ်ချက် များမှာကျောင်းခေါ်ကြိမ် ပြည့်မီခြင်း၊ ပညာရည်စစ်ဆေးအ ကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဘာသာရပ်အလိုက် တတ်မြောက်မှု အဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း၊ စာပေ၊ အနုပညာလုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများ ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ လူ မှုရေးပြစ်ချက်ကင်း၍ ကျောင်း စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း၊ အားက စားနှင့်ကာယလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျောင်းကောင် စီအသင်းအဖွဲ့များနှင့် လူမှုရေးအ သင်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း ゞင်း၏ရှင်း လင်းချက်အရ သိရှိရသည်။
အများပြည်သူ စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ အပန်းဖြေနိုင်ရန် မလှိုင်မြို့နယ် လှိုင်သာယာပန်းခြံကို တင်ဒါေ
ရွှေနန်းတော် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတွင် ရှေးဟောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားပညာရှင်တို့ ညှိနှိုင်းမှု ?
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြားမှု စွပ်စွဲချက်များ ဂီတလောက အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင
‘ဘယ်လို အခက်အခဲ၊ ဘယ်လို စိန်ခေါ်မှုမျိုးကို မဆို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာမှာ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေ??